Noocoin စျေး - အွန်လိုင်း NOO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Noocoin (NOO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Noocoin (NOO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Noocoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Noocoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Noocoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NoocoinNOO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00549NoocoinNOO သို့ ယူရိုEUR€0.00465NoocoinNOO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0042NoocoinNOO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00501NoocoinNOO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0496NoocoinNOO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0347NoocoinNOO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.122NoocoinNOO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0205NoocoinNOO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00735NoocoinNOO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00767NoocoinNOO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.123NoocoinNOO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0425NoocoinNOO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0298NoocoinNOO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.411NoocoinNOO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.927NoocoinNOO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00753NoocoinNOO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00832NoocoinNOO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.171NoocoinNOO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0382NoocoinNOO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.581NoocoinNOO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.53NoocoinNOO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.12NoocoinNOO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.405NoocoinNOO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.152
NoocoinNOO သို့ BitcoinBTC0.0000005 NoocoinNOO သို့ EthereumETH0.00001 NoocoinNOO သို့ LitecoinLTC0.0001 NoocoinNOO သို့ DigitalCashDASH0.00006 NoocoinNOO သို့ MoneroXMR0.00006 NoocoinNOO သို့ NxtNXT0.402 NoocoinNOO သို့ Ethereum ClassicETC0.000792 NoocoinNOO သို့ DogecoinDOGE1.62 NoocoinNOO သို့ ZCashZEC0.00006 NoocoinNOO သို့ BitsharesBTS0.21 NoocoinNOO သို့ DigiByteDGB0.187 NoocoinNOO သို့ RippleXRP0.019 NoocoinNOO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000187 NoocoinNOO သို့ PeerCoinPPC0.0181 NoocoinNOO သို့ CraigsCoinCRAIG2.47 NoocoinNOO သို့ BitstakeXBS0.232 NoocoinNOO သို့ PayCoinXPY0.0948 NoocoinNOO သို့ ProsperCoinPRC0.681 NoocoinNOO သို့ YbCoinYBC0.000003 NoocoinNOO သို့ DarkKushDANK1.74 NoocoinNOO သို့ GiveCoinGIVE11.75 NoocoinNOO သို့ KoboCoinKOBO1.22 NoocoinNOO သို့ DarkTokenDT0.00505 NoocoinNOO သို့ CETUS CoinCETI15.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 20:45:02 +0000.